इच्छाकामनाको मुहार फेर्न काम भएको छ : अध्यक्ष गुरुङ्ग – Saurahaonline.com
इच्छाकामनाको मुहार फेर्न काम भएको छ : अध्यक्ष गुरुङ्ग
पृथ्वी राजमार्ग र नारायणगढ मुग्लिन सडक खण्ड जोडिए पनि इच्छाकामना गाउँ पलिका भौगोलिक रुपमा बिकट छ । चितवनको एक मात्रै यो गाउँ पालिकामा सिमान्तकृत सुचिमा पर्ने चेपाङ्गको बाहुल्यता छ । देशकै मध्यभागमा रहेर पनि विकासका दृष्टिले पछि परेको यो गाउँ पालिकाको विकास निर्माणमा केन्द्रित रहेर यसै गाँउ पालिकाकी अध्यक्ष गिता गुरुङ्गसग आज हामीले कुराकानी गरेका छौ । प्रस्तुत छ अध्यक्ष गुरुङ्गसग चितवनका अग्रज पत्रकार बसन्त पराजुलीले गर्नुभएको कुराकानी :
तीन वर्ष अघि तपाईले चुनाव लढ्दै गर्दा जनतामा दिनुभएका आश्वासन अहिले कति पुरा हुदैछन् ?
चुनावमा दिएको आश्वासन त्यसै वाडेर मात्रै हुदैन । सपना वाडेर मात्रै पनि चुनाव जितिदैन । त्यो राम्रोसग जनताले बुझेका पनि छन् । चुनावमा जुन एउटा प्रतिवद्धता थियो इच्छाकामनाको मुहार फेर्नका लागि, इच्छा कामना गाउँ पालिकालाई नमुना बनाउनका लगि हामीले पनि योेगदान दिएर यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ र जनताले पनि पक्कै पनि गिताकुमारी गुरुङ्गवाट परिवर्तनको आश गरेर चुनेका छन् भन्ने वुझेर नै मैले काम गरेको छु । हामीले चुनावका बेला जति बोलेका थियौ त्यी कुरा चाहि तिन वर्ष लाग्दै गर्दा गरेका छौ भन्ने आत्म विश्वासका साथ भन्न सक्छौ । कुनै पनि ठाउँमा कमीकमजोरी त्रुटीहरु हुन दिएका छैनौ ।
चेपाङलाई विगतमा दिन जानियो शिप सिकाउन नजान्दा मगन्ते वनाइयो । अहिले दिने हैन शिप शिकाएर आत्मनिरर्भर वनाउने अभियानमा गाउँ पालिका जुटेको छ । उनिहरु विस्तारै स्वरोजगार हुदै आत्मनिरभर पनि वन्दै छन् ।
चुनाव लड्दा विकास निर्माणको आश्वासन दिनुभएको थियो हैन । त्यो पुरा भएका छन् त ?
चण्डीभन्ज्याङ्ग, दारेचोक, काउले र दाहाखानी गाविस मिलेर इच्छाकामना गाउँ पलिका बनेको हो । हामीले चुनाव जित्दै गर्दा हाम्रो गाउँ पालिकामा कुनै पनि बाटा घाटाहरु थिएनन् ।
कुनै पनि वडामा सडक सञ्जाल पुगेको थिएन । अहिले प्राय ठाउँमा सडक सञ्जाल पुगेका छन् । इच्छाकामनामा विजुली बत्ती थिएन अहिले बिजुली बत्ती बलेका छन् । खानेपानी थिएन खानेपानी पुर्याइएको छ । यस्ता हरेक कुराहरु यहाँ भएका छन् । हामीले प्रत्यक्ष नागरिकले देख्ने गरि काम गरेका छौ । जनताले महशुष गर्ने गरि काम भएको छ ।
हिजो सदियौ देखि मान्छेले भारी वोक्नु परेको थियो अहिले वाटाघाटा बने गाडी पुग्यो । मान्छेले भारी बोक्न परेको छैन । हिजो एक गाग्री पानी लिन दश घण्टा धाउनु पर्ने बाध्यता थियो । अहिले घर घर नै धारा पुगेका छन् । हामीले हिजो भोग्न परेका समस्यालाई मध्यनजर गर्दै जनताकै माग अनुसार अहिले समाधान गर्दै विकास गर्दै छौ ।
इच्छाकामना गाउँ पालिका त चितवनकै पर्यटकिय गन्तब्य क्षेत्र भित्र पनि पर्छ तर यि ठाउँको प्रचार प्रसार त खासै भएको देखिएन नि ?
इच्छा कामना गाउँ पलिका भित्र अहिले लामो झरनाले परिचित चित्राम झरना छ । सूर्योदयका लागि ख्याती प्राप्त सिराई चुली देखि एतिहासिक किल्ला उपरदाङ्ग गढी पनि यहि गाउँ पालिकामा पर्छ ।
त्रिशुली नदी देखि लिएर इच्छाकामना मन्दिर जस्ता पर्यटकिय क्षेत्रले भरिएको छ इच्छाकामना गाउँ पालिका । अहिले हामीले यि सवै क्षेत्रको विकास गर्ने गरि पर्यटन प्रर्वधनको काम गरि रहेका छौ । प्रचार प्रसार र प्रर्वधनका लागि पनि लागि रहेका छौ । जसले यहाँ भित्र लुकेका पर्यटकिय क्षेत्रहरु भटाभट देखिन थालेका छन् । आन्तरिक तथा वाह्रय पर्यटकहरु भटाभट आइ रहेका छन् ।
दुई ठूला राष्ट्रिय राजमार्गकै पहुँच पुगेर पनि यो चितवनको विकट गाउँ पालिकामा पर्छ । तत्काल देखिने विकासका काम केही गर्नुभएको छ त ?
इच्छाकामना चितवन जिल्लाको एउटा मात्रै गाउँ पालिका हो । यसमा हामीले पहिला भन्दा धेरै काम गरेका छौ । पहिला त के नै काम भएको थियो र ? बाटोघाटो सडक संञ्जाल केही थिएन ।
निर्माण गर्नुपर्ने कुरा पनि केही थिएन । सवै अभाव नै अभावमा तड्पिएको अवस्था थियो । अहिले आएर हामी जनप्रतिनिधी आइ सकेपछि इच्छाकामनाको मुहार नै फेरिएको जनताले महशुष गरेका छन् ।
चितवनकै पिछडिएको क्षेत्रमा पर्ने यो गाउँ पालिकामा सिमान्तकृत चेपाङ्गको वाहुल्यता पनि छ । उनिहरुको उत्थानका लागि गाउँ पालिकाले कस्ता कार्यक्रम अघि सारेको छ ?
मान्छेलाई दिएर मात्रै परिवर्तन गर्न सकिदैन भन्ने कुरा चेपाङ्ग समुदायमा विगतमा भएका योजनाका खर्चहरुले देखाएको छ । उनिहरु सधै पछाडी परेका छन् । हामी आउनु भन्दा अगाडी विभिन्न एनजिओ आइएनजिओ, विभिन्न संघ सस्था तथा सरकारले पनि के मात्रै गर्यो भन्दा दिन जान्यो तर उनिहरुलाई आफैले गर्नुपर्छ भनेर सिकाउन जानेन ।
जसले उनिहरुलाइ माग्न सिकायो । माग्दै गर्दा उनिहरु पछाडी परे । अहिले गाउँ पालिकाले पहिला उनिहरुलाई मानसिक रुपमै परिवर्तन गर्न लागेको छ । मान्छेलाई पहिला मानसिक रुपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने रहेछ । हामीले उनिहरुलाई मानसिक रुपमा परिवर्तन गर्दै उनिहरुको विकासका लागि विभिन्न शिप मुलक कार्यक्रमहरु दिएका छौ ।
उनिहरुले अहिले शिप सिकेका छन् । सिलाई कटिङ्ग, कृषिमा आधारित शिप जस्ता शिप मुलक कार्यक्रमले उनिहरुलाई अहिले विस्तारै आत्म निरभर वनाएको छ । कृषि, फलफूल, पशुपालन जस्ता कार्यमा अहिले उनिहरु सक्षम हुदै गएका छन् । यसले उनिहरुको आर्थिक विकास र सम्वृद्धिमा टेवा पुगेको विश्वास हामीले गरेका छौ ।
गाउँ पालिकाको थप विकासका योजनाहरु केही छन् की ?
हामीले इच्छाकामना गाउँ पालिकामा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि जस्ता सवै कुरालाई अग्र रुपमा लगेका छौ । आगामी हाम्रा कार्यक्रमहरु यिनै मा केन्द्रित हुने छन् । पहिलो प्राथमिकता अझै पनि सडकको पहुच नपुगेका ठाउँमा सडक विस्तार गर्ने हो । एउटा १५ शैयाँको अस्पताल हामीले बनाउदै छौ । प्रशासकिय भवनहरु पनि हामीले वनाउन लागेका छौ । इच्छाकामना मन्दिरको पूर्ननिर्माणको काम हुदै छ । फोहोर मैलाको ब्यवस्थापनको काम पनि भै रहेको छ ।
सर्यौ वर्ष, दुई सय वर्ष देखि थाती रहेका समस्याहरु, बालबालिकाले पनि महशुष गर्ने गरि विकास गर्ने छौ । वयोवृद्धले पनि महशुष गर्ने गरि विकासको काम गर्ने छौ । कुनै पनि युवाहरु रोजगारकै लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्तगर्ने गरि स्वरोजगार मुलक कार्यक्रमलाई प्राथमितामा राखेका छौ । हामीले वालिका वचत कार्यक्रम शुरु गरि सकेका छौ ।
अहिले कुनै पनि वालिका जन्मने बित्तिकै १० हजार रुपियाँ वैक खाता खोलेर राखिदिन थालेका छौ । यसले पनि अझै निरन्तरता पाउने छ । एकल महिलाहरुलाइ सक्षम वनाउनका लागि विशेष कार्यक्रम शुरु गर्दै छौ । सम्वृद्ध इच्छाकामना, मन मस्तिस्कवाट नै उच्चारण गर्न सक्ने गरि जनप्रतिििनधीले काम गर्ने छन् भन्ने परिवर्तन हामी दिन चाहन्छौ । यसमा सफल हुन्छौ भन्ने पनि लागेको छ ।